Nepal Local Election News – Rastriya Yuvajagaran
Home / Tag Archives: Nepal Local Election News
Tag Archives: Nepal Local Election News
भरतपुरका निर्वाचन आयुक्तको सहमति विनै पुनः मतदान गर्ने निर्णय
मात्रिका पौडेल काठमाडौं, जेठ २० गते । आयुक्तकै असहमतिका बीच निर्वाचन आयोगले भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १९ मा पुनः मतदान गराउने निर्णय भएको खुलेको छ । आयोगले शनिबार भरतपुरको मतगणनाका क्रममा मतदान स्थल कब्जा भएको ठहर गर्दै वडा नं. १९ को मतदान बदर गर्दै पुनःमतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । …
भरतपुर मत गणनास्थलभित्र ४६ जनाको टोली प्रवेश
चितवन– माओवादी बुथ प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेपछि सिलबन्दी गरिएको भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणनास्थलमा चार दिनपछि बिहीबार सिल खोलिएको छ। च्यातिएका मतपत्रको विस्तृत विवरण संकलन गर्न ४६ जनाको टोली मतगणनास्थल प्रवेश गरेको छ। भरतपुरका उम्मेदवार प्रतिनिधि, चितवनका प्रहरी प्रमुख दीपक थापा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्ट, भरतपुरका मुख्य निर्वाचन अधिकृत कविप्रसाद न्यौपानेको उपस्थितिमा …